Hevitra sy faminaniana | Martech Zone
Fanamarihana sy faminaniana
Alatsinainy Desambra 18, 2006 Alakamisy, Jona 11, 2009 Douglas Karr
ProBlogger manana Tetik'asa fanoratana vondrona mahafinaritra hafa. (Afaka mandray anjara koa ianao!)
Darren dia mitovy amin'ny fananana mpanazatra manokana amin'ny fanaovana bilaogy. Mahalana aho no mahita lahatsoratra amin'ny ProBlogger tsy tena izy ilay izy. Heveriko fa nanao ezaka miavaka i Darren mba hahatonga ny bilaogy ho tsara kokoa manerana ny Internet.
Ity Tetik'asa fanoratana vondrona ity dia tokony hanana lisitra famoronana, rant, sns. Ny hevitra momba ny taona lasa na faminaniana amin'ny taona ho avy. Nanapa-kevitra ny ho mamorona kely aho ary manandrana manambatra azy roa. Etsy ambany no hahitanao ny hevitro manokana momba ny zavatra nahafinaritra tamin'ny 2006 sy ny eritreritro momba izay ho tsara amin'ny 2007. Topazo maso ireo faminaniana tamin'ny 2007, heveriko fa nanao asa feno tsara aho tamin'ny fanaovana tahiry ireo faritra samihafa mikasika ny bilaogy ary mieritreritra am-pitandremana ny lalana tokony halehan'ny lohahevitra tsirairay.
Ankafizo! Toy ny mahazatra, tongasoa ny fanehoan-kevitra. Ary aza hadino ny manaraka azy ProBlogger hahafahanao mijery izay nosoratan'ny olon-drehetra.
Tsara tamin'ny 2006
Tsara tamin'ny 2007
Intel Mac miaraka amin'i XP
Intel PC miaraka amin'ny OSX
Paikady mifangaro w / Web Web
Mpanome Serivisy fampiharana
Client-Server amin'ny alàlan'ny Net
Hanova-eo amin'ny toerana
Servers Virtual Domain
Fialam-boly miaraka amin'ny Flash
Dec 19, 2006 amin'ny 1: 23 AM
Miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny vinavinao Doug aho, na dia tsy hitako aza fa misy fiantraikany be eo amin'ny tsenan'ny mpilalao media ny Zune. Nanoratra ny lisitry ny faminaniana ho an'ny tetikasa fanoratana vondrona aho.
Mirary soa amin'ny faminanianao farany 🙂
Dec 19, 2006 amin'ny 9: 44 AM
Tena nivoaka tamin'ny rantsambatana aho tamin'ny Zune! Indrindra fa vao avy nividy iPod ho an'ny zanako tamin'ny Krismasy. Lavitra ahy io.
Misaotra noho ny vintana fa mila izany aho! Fantatrao ve ireo modely taloha mpanapitrisa 25-30 taona tsara tarehy izay tia raim-pianakaviana tokan-tena izay tia mibilaogy amin'ny fotoana malalaka rehetra?
Dec 19, 2006 amin'ny 11: 30 AM
Tsia, fa raha mahita aho dia azoko antoka fa halefako ny lalanao 🙂
19 Desambra 2006 à 12:01
Oh, fomba tsara indrindra handefasana faminaniana, tiako izany! Ny sisintany dia mila midina amin'ny vidiny ary manolotra safidy an-tserasera bebe kokoa, ao anatin'izany ny fizarana tsena efa nampiasaina toa an'i Amazon, mba hanakaiky an'izany mihitsy aza.
Nandray anjara tamin'ity tetikasa ity ihany koa izahay, mijanona eo raha azo atao!
19 Desambra 2006 à 9:10
Iray amin'ireo fampitahana tsara indrindra hitako hatramin'izao ary faminaniana tsara. Ny blôginao dia jerena izao lol.
Izaho koa dia nandray anjara tamin'ity concours ity. Miandry an'i darren fotsiny ny hametraka azy amin'ny lahatsorany manaraka
Mamahana ny blôginao aho
19 Desambra 2006 à 9:22
Misaotra, Mama Duck! Misaotra Ashish!
19 Desambra 2006 à 10:15
Aza adino ny mijery ity lisitra ity amin'ny faran'ny taona 2007 🙂
Dec 20, 2006 amin'ny 12: 00 AM
Tsy maintsy mampahatsiahy ahy ianao. Tsy maharitra toy izany ny fitadidiako. 😉
Dec 20, 2006 amin'ny 7: 00 AM
Faminaniana tsara lehilahy…sy bilaogy mahafinaritra..
Dec 20, 2006 amin'ny 10: 21 AM
Misaotra, Madhur! Ny valin-kafatra toy izany dia mitazona ahy hatrany!
Dec 21, 2006 amin'ny 10: 26 AM
Fomba tsara handehanana amin'ny faminaniana.
Wide Monitors - eny, efa mahita izany.
Zune – Hmmm, eo amin'ny teboka farany hividianana iray aho.
28 Desambra 2006 à 3:40
Mahafinaritra ny mahita fa nosoloin'i Zunes ny iPod, toy ny nafindran'ny Mac OSX ny Windows XP.
Tsy tena mahita ny zava-nitranga voalohany (ary na ahoana na ahoana dia tsy dia haingana), fa azo antoka fa manantena ny faharoa ho tanteraka.
(Hey, midika izany fa ny tompon'ny PC rehetra manana iPod dia hahazo IntelMac ary hampifanaraka izany amin'ny rindrambaiko Microsoft sasany? Hm…)